SOMALITALK - PORTLAND
Cali Khaliif Galaydh oo Booqday Portland, Oregon.
Qore: Abdallah Mohamed | shariif88@yahoo.com
Si diiran oo Cali Khaliif loogu soo dhoweeyey Portland
Cali Khaliif oo Markale si kulul u Dhaleeceeyey Xukuumada Itoobiya
Waxaa maalintii Arbacadii la soo dhaafay ee bisha juun ay ahayd afarta ku yimi booqasho gaaban magaalada Portland ee gobolka Oregon Ali khaliif Glaydh. Ali Kaliif Glaydh oo ay garoonka dayuuraha ee caalamiga ah ee magaalada Portland ay ku soo dhaweeyeen xubno iyo odoyaal ka socday bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaas.
Isla duhurnimadii uu yimid ba Ali Khaliif wuxuu la hadlay qaar ka mid ah dadwaynaha Soomaliyeed ee ku dhaqan magaaladaa, Isaga oo isla markaas na kormeer ku maray hay’adaha la shaqaya qaxootiga. Xarumaha uu booqday waxaa ka mid ahaa, International Refugee Community Of Oregon oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano IRCO. Waxaa warbin gaaban halkaas ku siiyey Maxamed Amiin oo ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya hay’daas.
Maxamed Amiin wuxuu sheegay in ay hay’adani u shaqayso dhamaan qaxoodiga dunida meelkastaba ha ka yimaadaane, wuxuuse ku nuux nuuxsaday in qofwalba loogu shaqeeyo afkiisa hooyo. Intaas ka dib Ali khaliif wuxuu u gudbay qolka shirarka ee hay’adaas, halkaas oo ay dadwayne badan oo soomaliyeed ku sugayeen. Waxaa halkaasi ku soo dhaweyey rag badan oo oda’yaal ah, waxaana ka mid ahaa jeneraal Muuse Abdi, danjire Abdikariim Barkhadle, Abdicasiis Olol diinle iyo Kayse Jaamac oo ka socday ururka Community Language and Culture Bank oo isugu ahaa ururkii soo marti qaaday Cali Kaliif.
Waxaa markii ugu horaysay hadalkii qaatay Abdicasiis Olol diinle oo ku hadlayey magaca shacabka ku nool Porland, isaga oo sheegay in ay sharaf wayn u tahay in ay ku soo daweeyaan Ali khaliif magaalada Portland, waa sida uu hadalka u dhigay e. Intaas ka dib waxuu cod dheereeyaha ku soo dhaweeyey Kaysa Jaamac oo isaguna halkaas si diiran ugu soo dhaweeyey Ra’isal wasaaraha. Ali khaliif oo intaas kadib la hadlay dadwaynihii isugu yimi wuxuu uga xogwaramay guud ahaan ujeedada safarkiisa oo uu ku tilmaamay mid martiqaad oo uu ka helay ururka CLCB.
Ali khaliif wuxuu intaas ka dib si qotodheer ugu waramay xaalada siyaasadeed ee dalka Soomaliya iyo guud ahaan siyaasada gobolka geeska Africa. Wuxuu si kulul u dhaleeceeyey xukuumada Itoobiya oo uu isagu ku timaamay mid u tafa xaydatay in aan dowladi ka dhalan dhulka Soomaliyeed. Wuxuuna ku tilmaamay ujeedadeeda mid ku wajahan mid dhaqaale iyo siyaasadeed. Ali wuxuu ugu danbayntii sheegay in dani ay ugu jirto xuukuumada Itoobiya in ay ka waantowdo hagardaamooyinka ay ku hayso dalka Somaaliya, isaga oo sheegay in aan labada shacbi kala maarmin. Sidoo kale Ali khaliif wuxuu niyad xumo ka muujiyey shirka haatan mudada dheer la isu cidiyo qoranayey ka socday dalka Kenya. Ali wuxuu sheegay rajada kaliya ee shirkaasi leeyahay waa hadii bulshada caalamku hirgaliso wixii ka soo baxa balse hadii lagu dhaafo Soomalida uu mari doono wadadii ay mareen shirarkii ka horeeyey. Ali wuxuu si gaar ah u amaanay shirkii ka dhacay dalka Jabuuti oo u ku timaamay mid ka dhashay rabida shacabka Soomaliyeed, wuxuuse sheegay wixii ka soo baxay in ay is hortaageen kuwo u adeegaya dano shisheeye oo uu ula jeeday dagaal oogayaasha gacansaarka la leh dalka Itobiya.
Ali Khaliif wuxuu sigaar ah u amaanay shacabka Somaliland oo uu ku tilmaamay shacab u tafo xaytay sugida amaankooda.
Ali khaliif waxuu kale oo uu ka hadlay laba Jaamicadood oo ku yaala magaalada Portland. Jaamicada Portland State University oo ka hadlay habeenimadii shanta bisha juun, Cali wuxuu marlabaad aad u dhaleeceeyey xukuumada Itobiya iyo siyaasadeeda ku wajahan dalka Soomaliya. Waxaa iyaduna halkaas ka hadashay gabadha la yidhaahdo Stephanie Stephens oo ku hadlaysay magaca Community Language and Culture Bank. Stephens waxay halkaas ka sheegtay in ururkoodu uu ka shaqaynayo isfahamka dhaqamada kaladuwan iyo in ay aqoontooda is waydaarsadaan. Waxaa isaguna halkaas ka hadlay Kayse Jaamac oo ah ninka aas aasay ururka CLCB oo isagu sheegay in ururkoodu isagu danaynayo Arimaha bulshada.
Warbixintii: Abdallah Mohamed | shariif88@yahoo.com
Faafin: SomaliTalk.com | June 12, 2003
WARARKII HORE EE PORTLAND